PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-21 - Utira uyimbungulu: Mampintsha
Utira uyimbungulu: Mampintsha
Uthi utira uthanda ukuphatha
Ilanga langeSonto - 2018-01-21 - Front Page - SANDILE MAKHOBA
UFUNGA uyagomela umampitsha, uthi ngeke aphinde yena aphathwe nguDJ Tira. Ukusho lokhu engxoxweni ekhethekile abenayo NELANGA Langesonto, emzini wakhe ewestville, entshonalanga yetheku, mayelana nomsindo ophinde waqubuka kuleli sonto othinta ibig NUZ.
Ukubeke kwacaca ukuthi naphezu kwezinkinga ezikhona kodwa ngeke ayivumele ibig NUZ ishabalale.
Umandla “Mampintsha” Maphumulo uveze ukuthi akancenge muntu - uma UDJ Tira, ogama lakhe langempela ngumthokozisi Khathi, benomzi “Danger” Mkhwanazi, bengazimisele ngokuza kuye kukhulunywe kahle, kulungiswe inkinga ekhona, yena uzoqhubekela phambili, aqale ibig NUZ entsha yesine.
Utshele leli phephandaba ukuthi vele ibig NUZ yaqalwa nguyena esafunda isikole, bengekho bonke laba asebekhona manje.
“Okumele bakwazi laba wukuthi ibig NUZ (yamanje) akusiyona eyokuqala. Ngakho-ke uma besalokhu beshona le nale ngizoqhubekela phambili mina ngoba ngiyasebenza futhi angidinge mvume yamuntu ukuqala ibig NUZ entsha,” kusho umampintsha obedinwe ethuthumela, esho nokusho ukuthi ukhathele wukuthula manje.
Uthi ukuthula kwenza abantu begcine sebebona ukuthi nguyena umuntu omubi.
Elanda ngokuqala kwebig NUZ, uthi wayiqala nobhar owake waduma khona e-afrotainment, okwathi ngokuhamba kwesikhathi washiya ngenxa yezizathu ezagcina zingacacanga.
“Ngemuva kokushiywa ngubhar ngathola abanye abafana ngaqhubeka nabo, babuye bahamba. Ngahamba ngayohlanganisa egoli, ngahlangana nor Mashesha, kwathi ekugcineni sathola udanger okuyimanje sisenaye yi-
yonake ibig NUZ abantu abayaziyo ekubeni ngayiqala kudala mina,” kulanda yena.
Ukugcizelele ukuthi impela uma utira nodanger bengakhulumi into eya phambili uzoqala ibig NUZ yesine ngale kokuphazanyiswa ngumuntu.
“Njengamanje ngilindele bona ukuba beze sikhulume bese siyasebenza kodwa ngeke ngilinde isikhathi eside,” kuqhuba yena.
Uthi uma benquma ukuqhubeka basebenze notira uzimisele ukubambisana naye kodwa hhayi ukuthi yena abe ngaphansi kwakhe.
“Inkinga katira wukuthi uthanda ukuphatha. Uma ebona ukuthi uyakhula uyakumfimfitha akushiye kanjalo, uyimbungulu” kusho yena.
Ngesikhathi eqala inkampani yakhe iwest Ink uthi uhambe waya kutira wayocela izibusiso, wavuma utira emjabulela.
“Ngiyasola ubezitshela ukuthi ngikhuluma into esekude ukwenzeka,” kuchaza yena.
“Ngafika kuyena ngacela senze into okuthiwa i-afrowestink engangizokhipha ngayo amaciko ami kodwa wavele wangitshela ukuthi ngeke kulunge ngoba sizodida abantu amakhanda, kungcono ngizenzele ngedwa,” kuqhuba yena.
Nakuba ethi wayesekulungele ukusebenza yedwa kodwa lawo mazwi awahlalanga kahle ngoba ubesazimisele ngokusebenza notira. Ugonyuluka nje umampi- ntsha uke wakhuluma kweminye yemisakazo lapho eveze khona ukungenami ngesitatimende esikhishwe ngudj Tira, ecacisa ngobudlelwano babo.
Utshele leli phephandaba ukuthi okubuhlungu wukuthi abantu abani-ngi bazitshela ukuthi nguyena omubi kuyona yonke le nto kanti abazi ukuthi konke kuqala ngoba esezimele.
“Emsakazweni mina ngikhulumile ngaqonda ngqo kodwa uma ulalela izimpendulo zabo bobabili aziqondile (Utira nodanger), abafuni ukuphumela obala,” kusho umampintsha.
Imizamo eminingana yokuthola utira ukuba naye aphawule kayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.
Uma ebona ukuthi uyakhula uyakumfimfitha akushiye kanjalo...
UBHODLA umlilo umandla “Mampintsha” Maphumulo, uthi akazoba yincelebane yamuntu yena. Utshele ILANGA Langesonto
angasebenzisana nodj Tira kodwa hhayi ukuthi utira abe ngumphathi wakhe. *Umbiko ogcwele ekhasini 3
UMAMPINTSHA ngesikhathi enengxoxo ekhethekile NELANGA Langesonto emzini wakhe ewestville ethekwini.